Isabella Arantes: Kintan'ny breziliana mandresy an'izao tontolo izao | TeraNews.net
Isabella Arantes: Kintan'ny breziliana mandresy an'izao tontolo izao
mpanoratra Vaovao momba an'i Tera Navoaka tamin'ny 12.04.2019
Tsy ao anaty fironana intsony ny magazine Glossy - lasa malaza, mametraka fotsiny ny Instagram ary manintona ny sain'ny vahoaka. Toy izany koa ny modely vaovao Isabella Arantes (Isabella Arantes) avy any Brezila. Namoaka ny sariny sy ny fitaovana momba ny lamaody ilay tovovavy.
Raha efa nisoratra anarana tao amin'ny 2013 tao anatin'ny tambajotra sosialy kely tamin'izany fotoana izany i Isabella nahazo an'i 2019 taona 50 000 tena mpamatsy vola Isabella. Ny kintana breziliana isan'andro dia mandefa sary ao amin'ny tambajotra sosialy ary mizara ny bikaingo aminy. Ho an'ny manokana, ny fashionista dia maneho ny marika La Bella, izay toerana ao amin'ny famokarana akanjo ambanin'akanjo.
Isabella Arantes: fiainana manokana
Ny modely dia teraka tamin'ny Jona 29 1997 tamin'ny taona (taona 21 izy io). Araka ny horoscope - homamiadana. Toerana nahaterahana sy fonenana - Brezila. Horonana - mandihy. Fantatra fa anisan'ilay tarika Domingao do Faustao ny kintan'i Brezila. Toeram-panambadiana - tsy manambady. Raha mino ny haino aman-jery, Isabella Arantes dia nanintona ny hatsarany ilay mpilalao baolina kitra breziliana malaza - Neymar da Silva. Ao amin'ny rakitsary sary ao amin'ny Instagram, ao amin'ny fizarana "manokana", misy ny sarin'i Isabella miaraka amin'ny zanak'anabaviny.
Ny votoatin'ny tambajotra sosialy Instagram. Ny renivohitry ny modely dia manodidina ny 100 arivo dolara. 2019 taona ho an'ny Isabella dia nahomby. Ny modely dia isan'ireo folo vavy tsara tarehy indrindra teny amin'ny planeta. Ny Stylists dia manamafy fa ny kintana vaovao avy any Brezila dia manana hoavy lehibe.
3D Printer - inona izany, maninona no ilaina izany
Ny Smartwatches sy ny fehin-tànana fanatanjahan-tena dia tsy dia malaza loatra araka ny eritreretintsika
Maninona ianao no mila mividy fitaovana matihanina
Smart watch Kospet Optimus 2 - gadget mahaliana avy any Shina
Fananganana pisinina - inona no misy, endri-javatra, izay dobo tsara kokoa
Smartphone IIIF150 R2022 - fiara mifono vy amin'ny fotoana rehetra
Ugoos AM7 Smart TV - natomboka ny varotra
Apple iPhone 13 - modely, vidiny, sary, daty fampisehoana
Apple iPhone 11: fitohizan'ny tsipika finday
VONTAR X88 PRO: topimaso, fanitsiana
Ny fitrandrahana cryptocurrency amin'ny SSD sy HDD
Fijoroana smartphone - topimaso: inona no safidiana